Sagootin Insight International Tours aasaasihii: Halyeey run ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Dadka » Sagootin Insight International Tours aasaasihii: Halyeey run ah
Wararka Ururada • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Nick Tarsh iyo xaaskiisa Helen
Nin noloshiisa si buuxda ugu noolaa isla markaana wax ku ool ku soo kordhiyey nolosha qof kasta oo uu la kulmay iyo qaar badan oo badan oo aanu la kulmin… halyeey run ah - kani waa Nick Tarsh.
Shaqo la aan iyo deyn qaadasho iyo 4 caruur ah oo lagu taageerayo, Nick wuxuu si geesinimo leh u aasaasay 'Insight International Tours'.
Sannadkii 1990, wuxuu noqday Guddoomiyaha aasaasay Ururka Hawl-wadeennada Dalxiiska ee Yurub (ETOA), oo loo aasaasey inuu u ololeeyo dhammaan warshadaha heer EU.
In kasta oo uu wax badan qabtay, wuxuu dareemay in guushiisa ugu weyni ay tahay inuu guursaday Helen, oo si dirqi ah uga tagtay dhiniciisa 62 sano oo guur ah.
Dad badan ayaa isaga ku ogaan doona hal socod nololeed, iyagoo ka warqabaya wax qabadkiisa cajiibka ah, iyagoon ogeyn inuu mid kale oo la mid ah ku fiicnaa.
Isagu wuxuu ahaa wiilkii ugu horreeyay ee Yuhuud ah ee madaxa ka ah Clifton College, kabtanka akadeemiyada iyo kabtanka XV ugu horreeyay. Wuxuu matalayay Liverpool, Lancashire, iyo England isagoo ah ciyaartooy rugby ah oo iskuuley ah wuxuuna helay tijaabo England ah oo ah ciyaal kubbadda golf. Wuxuu ku guuleystay deeqda waxbarasho ee gobolka ee xisaabta wuxuuna boos ka helay Clare College Cambridge halkaas oo uu sharciga ka akhriyay. Isla sannadkaas uu ku qalin jabiyey maamuusyada darajada koowaad, wuxuu sidoo kale matalay Cambridge ciyaartii 'Varsity Match'. Wuxuu si isdaba joog ah u sheegay in ka soo bixida cowska Twickenham ay ahayd mid ka mid ah waqtiyadii ugu fiicnaa noloshiisa. Laakiin inkasta oo ay ahayd xilligiisii ​​uu ku faanay, wuxuu dareemay in guushiisii ​​ugu weyneyd uu guursaday Helen, oo si dhib yar uga tagtay dhiniciisa 62 sano oo guur ah.
Kadib markuu ka baxay jaamacada, wuxuu uqalmaa inuu noqdo qareen, isagoo kujiray kaalinta afaraad wadanka gudihiisa finalka. Si kastaba ha noqotee, sharcigu ma ahayn isaga, wuxuuna doortay xirfad ganacsi, isaga oo ka bilaabay shirkadda qoyska isaga oo ah maareeyaha bakhaarka alaabta guryaha ee Maxkamadda ee Walton ee Thames.
Qalbiga, wuxuu ahaa ganacsade, mana aysan sii dheerayn markii uu doonayay inuu laan baxo. Waxaa taageeray mid ka mid ah adeeradiis, wuxuu iibsaday qayb ka mid ah Oversas Visitors Club (OVC), oo ah shirkad ku taal Earls Court, London, oo uu toban sano orday, sidaasna ku sameysay, waxay abuurtay waxa noqon lahaa “meesha loo socdo” dhalinyarada booqashada ku joogta Boqortooyada Midowday markii ugu horaysay kana kala yimid Australia, New Zealand, South Africa, iyo meelo kale.